သူမြားတှေ နဲ့ မတူတဲ့ မနကျခငျးနိုးထပုံကို ပရိသတျတှဆေီ ခပြွလာတဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး ရဲ့ ဗီဒီယို – Let Pan Daily
သူမြားတှေ နဲ့ မတူတဲ့ မနကျခငျးနိုးထပုံကို ပရိသတျတှဆေီ ခပြွလာတဲ့ ဆုမွတျနိုးဦး ရဲ့ ဗီဒီယို
ခဈြပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဆုမွတျနိုးဦး ကတော့ ပွုံးပြျောရှငျနတေဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ တဈမှုထူးခွားတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူလေးပါနျော။ ဆုမွတျနိုးဦးက အနုပညာလမျးခရီးကို ယုံကွညျမှုရှိရှိ အကောငျးဆုံးလြှောကျလှမျးနပွေီး ယခုဆိုရငျ နရောတဈနရောကို အခိုငျအမာ ရပျတညျထားနိုငျခဲ့ပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမက သရုပျဆောငျ ပိုငျးမှာလညျး ပွောစရာ မလိုလောကျအောငျ ပီပီပွငျပွငျ သဘာဝကကြ လုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သူလေးပါနျော။
ပရိသတျအခဈြတျောမလေး ဆုမွတျနိုးဦး ကတော့ အမွဲပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျပွီး စိတျသဘော ထားလညျး ပွညျ့ဝတာကွောငျ့ ခဈြခငျသူတှပေေါမြားနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ မကွာခဏဆိုသလို ဆုမွတျနိုးဦး က ပရိသတျတှအေတှကျ ခဈြစရာကောငျးလောကျတဲ့ အလနျးစား ပုံရိပျလေးတှကေို
ဖျောပွပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ယခုတဈခါမှာတော့ ခါတိုငျးနဲ့မတူတဲ့ ပငျကိုယျအလှတှနေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး တဈခုကို တငျပေးလာတာပါနျော။
ဒါကတော့ သူမရဲ့ မနကျခငျးနိုးထ ပုံကို ဗီဒီယိုလေး ရိုကျပွပွီး ပရိသတျတှဆေီခပြွလာတာပါ။ ခဈြစရာ ခှေးလေးတှနေဲ့အတူ သာယာလှပတဲ့ နံနကျခငျးလေးမှာ နိုးထလာတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တငျပေးလာတာ ဖွဈပွီး ” ကြှနျမရဲ့ ကမ်ဘာလေးပါ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလညျး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျတှကေ မငျးသမီး ခြောလေး ဆုမွတျနိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ရှုပွီး Comments မှာ တဈခုခု ရေးသားခဲ့ပါအုနျးနျော…. ။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဆုမြတ်နိုးဦး ကတော့ ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ တစ်မှုထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူလေးပါနော်။ ဆုမြတ်နိုးဦးက အနုပညာလမ်းခရီးကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းနေပြီး ယခုဆိုရင် နေရာတစ်နေရာကို အခိုင်အမာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာလည်း ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် ပီပီပြင်ပြင် သဘာဝကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူလေးပါနော်။
ပရိသတ်အချစ်တော်မလေး ဆုမြတ်နိုးဦး ကတော့ အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီး စိတ်သဘော ထားလည်း ပြည့်ဝတာကြောင့် ချစ်ခင်သူတွေပေါများနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ဆုမြတ်နိုးဦး က ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေကို
ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာတော့ ခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တစ်ခုကို တင်ပေးလာတာပါနော်။
ဒါကတော့ သူမရဲ့ မနက်ခင်းနိုးထ ပုံကို ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ပြပြီး ပရိသတ်တွေဆီချပြလာတာပါ။ ချစ်စရာ ခွေးလေးတွေနဲ့အတူ သာယာလှပတဲ့ နံနက်ခင်းလေးမှာ နိုးထလာတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပြီး ” ကျွန်မရဲ့ ကမ္ဘာလေးပါ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေက မင်းသမီး ချောလေး ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ရှုပြီး Comments မှာ တစ်ခုခု ရေးသားခဲ့ပါအုန်းနော်…. ။
သူမအား ခဈြသူအဖွဈရှေးခယျြပါက တိုကျနဲ့ကား အလိုရှိရာပေးမယျ့အကွောငျးပွောကာဈေးဗနျးခငျးခြ လိုကျတဲ့ မမဆောငျး ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ
“၀င်သွားပီ ဝင်သွားပီ” ဆို တဲ့ သီချင်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော် T Jack မှ ရှေ့က သီချင်းတွေ ကို လေ့လာပြီး မှ ဝေဖန်ရန် ပြောကြား
အဆိုတော် ယုန်လးရဲ့ ငါတို့အားလုံး ရဲ့မြေ … (စည်းလုံးသင့်ပြီ မြန်မာပြည်) သီချင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ သူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
ဘိုမ ရုပျလေး အလား ထငျမှတျ ရလောကျအောငျ ကို ခဈြစရာ မိတျကပျ ပွငျဆငျ မှုလေး နဲ့ အိခြောပို